ငွေလဲနှုန်း MMK သို့ AUD, မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် သြစတြေးလျဒေါ်လာ, ပွောငျး
ငွေလဲနှုန်း MMK — AUD ပွောငျး မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် သြစတြေးလျဒေါ်လာ, ဂဏန်းတွက်စက်, ဘယ်လောက်အလိုတော်
0,00 AUD သြစတြေးလျဒေါ်လာ
ဒီငွေလဲနှုန်း MMK/AUD ရက်စွဲအပေါ်သက်ဆိုင်ရာ 25.10.2020 01:54
သင့်အနေဖြင့်ငွေကြေးကူးပြောင်းခြင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်များမှာ မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ (MMK) и သြစတြေးလျဒေါ်လာ (AUD). အဆိုပါလဲလှယ်မှုနှုန်းကို up-to-date ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါသည် 25.10.2020 01:54.
သြစတြေးလျဒေါ်လာ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ code ကို AUD) — : ဒေသခံငွေကြေးကဲ့သို့သောနိုင်ငံများအတွက်ဖြစ်ပါသည် သြစတြေးလျ, Tuvalu, ကီရီဘာတီ, -Norfolk, Nauru ကျွန်း, ကိုကိုးကျွန်း.
54593,81
109187,61
50 45 938,06
100 91 876,13
200 183 752,25
500 459 380,63
1000 918 761,26
2000 1 837 522,53
50004593 806,32
100009187 612,64
20000 18 375 225,28
50000 45 938 063,20
ငွေကြေးက ISO code ကို AUD
အထိမ်းအမှတ် $ • A$
ဒင်္ဂါးပြား 5, 10, 20, 50 ဆင့်, 1,2AUD
ပိုက်ဆံငွေစက္ကူတွေ 5, 10, 20, 50, 100 AUD
နိဒါန်း၏တစ်နှစ်တာ 1966 ခုနှစ်
ယခင်ငွေကြေး နယ်သာလန် Antillean Guilder
ပြဿနာများ၏ဘဏ် သြစတြေးလျ၏ Reserve Bank သည်
ပူစီနံ တော်ဝင်သြစတြေးလျ Mint,, ပါ့ Mint,
ACS အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး. Page load 0.0362 s.